व्हिस्की प्रकार: स्कट्च, बोर्बन, आयरिश व्हिस्की-उद्योग समाचार-गोलal्ग लिकर (समूह) के हो
व्हिस्की प्रकार: स्कट्च, बौर्न, आयरिश व्हिस्की भनेको के हो
Scotch के हो?
स्कट्चको रूपमा योग्य हुनको लागि आत्मालाई कुपोषित जौबाट बनाउनुपर्दछ, धेरै स्कट्चहरूले जौ, पानी र खमीर बाहेक अरू केही प्रयोग गर्दैनन्। तपाईंलाई अन्य अनाजहरूका सम्पूर्ण अन्नहरू साथै कारमेल रंगीन सामेल गर्न अनुमति छ। कुनै किण्वन योजक वा छोटो-कटौती अनुमति छैन।
आत्मा पनि तीन वर्ष भन्दा कमको लागि ओक पातमा उमेरको हुनुपर्दछ, र 94.8 .100..XNUMX% भन्दा कममा एक ABV हुनै पर्छ। अन्त्यमा, तपाईं आफ्नो पेयलाई स्कट्च कल गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म यो स्कटल्यान्डमा XNUMX% बनाइएको हुँदैन।
बौर्न भनेको के हो?
बौर्न ह्विस्की एक दाना मिश्रणबाट बनाउनु पर्छ जुन कम्तिमा %१% मकै हो। यस मिश्रणको लागि किण्वन प्रक्रिया प्राय: पुरानो फर्मेन्टिatch ब्याचबाट केही म्यासमा मिसिएर शुरू गरिन्छ, यो प्रक्रियालाई खट्टा मैश भनेर चिनिन्छ।
स्कटल्याण्डमा स्कट्च कसरी बनाउनुपर्दछ त्यसरी नै, बोर्बनलाई केवल बोर्बनको रूपमा लेबल गर्न सकिन्छ यदि यो संयुक्त राज्यमा बनाइएको हो। जबकि नियमहरू स्क्यानको तुलनामा बोर्बनसँग अलि बढी ढीला छन् जबकि यसले अझै पनि केही आवश्यकताहरूको अनुरूप हुनुपर्दछ।
आत्मालाई no०% भन्दा बढी मदिरा (१ 80० प्रुफ) मा आसुत हुनुपर्दछ र char२..160% भन्दा बढी हुनुहुन्न जब नयाँ जडिबुटी ओक ब्यारेलमा उमेरका लागि क्याक्समा राखिन्छ। अन्तमा बौर्नको न्यूनतम बुढो अवधि हुँदैन, तर तपाईंको उत्पादलाई स्ट्रेट बोर्बन कल गर्न यो दुई बर्ष भन्दा कम उमेरको हुनुपर्दछ।
मिश्रित बौर्नलाई रंग, स्वाद र अन्य आत्माहरू समावेश गर्न अनुमति दिइन्छ, जबसम्म मिक्सको %१% सीधा बोर्न हुन्छ। मिश्रित बौर्नको बोतलमा उमेर मिक्सको सबैभन्दा कान्छो व्हिस्कीको उमेर हुनुपर्दछ।
टेनेसी व्हिस्की भनेको के हो?
सबै उद्देश्य र उद्देश्यहरूको लागि, टेनेसी व्हिस्की टेनेसीको राज्यमा सिधा बर्नबन बनेको छ। यस आत्माको उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरू, जैक डानिएल्स, उनीहरूको व्हिस्कीलाई बोर्नको लेबल चाहन्न, तिनीहरू दावी गर्छन् कि तिनीहरू केवल व्हिस्की मात्र हुन् जसले आत्मालाई चारकोल फिल्टरिंग प्रक्रिया मार्फत राख्छन्।
राई भनेको के हो?
राई परिभाषित गर्नका लागि सबै ह्विस्कीमा सब भन्दा मुश्किल हो। यसको कारण क्यानाडामा उत्पादित राईको लागि ऐतिहासिक नामकरण सम्मेलन आयो। राई व्हिस्की सधैं राई म्यासबाट बनाईएको हुँदैन।
क्यानाडाले राईलाई लगभग डिस्टिल गरिसकेको छ जतिखेर यो देश अस्तित्वमा रहेको छ र ऐतिहासिक रूपमा म्यासको अधिकांश भाग राई म्यासको हो। तर कुनै वास्तविक नियममा ठाउँमा आत्माको उत्पादन गरिएको छ भने रासन राईमा राई राईमा खेल्ने मकैको खेलाडी 9: १ भन्दा बढि।
क्यानाडामा राईको रूपमा तपाईंको व्हिस्कीलाई लेबल गर्ने एक मात्र नियम यो हो कि यसमा केही राई राख्नुपर्दछ, र गन्ध, स्वाद र चरित्र सामान्यतया क्यानाडाको व्हिस्कीलाई श्रेय दिईन्छ… जे भए पनि।
आइरिस व्हिस्की भनेको के हो?
आयरिश व्हिस्की कुनै पनि ह्विस्की जुन आयरल्याण्डको आयरल्यान्ड वा उत्तरी आयरल्यान्डमा उमेरका हुन्छन्। Scotch जस्तै यो आसियात हुनु पर्छ must .94.8..XNUMX XNUMX ​​भन्दा कमको ABV मा।
यो खमीर-किण्वित अन्न मैशबाट बनाउनु पर्छ यो तरिकामा कि आसुतमा सुगन्ध र स्वाद प्रयोग गरिएको सामग्रीबाट व्युत्पन्न हुन्छ। तपाईं कुनै पनि अन्नको अनाज प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर यदि तपाईं दुई वा बढी डिस्टेल्टहरू मिलाउनुहुन्छ भने यसलाई मिश्रितको रूपमा लेबल गरिएको हुनुपर्दछ।
अन्तमा, व्हिस्की कम्तिमा तीन वर्ष काठको क्याक्समा उमेरको हुनुपर्दछ।
अघिल्लो: २०१ For को लागि नयाँ शराब प्रवृत्ति
अर्को: विधि Charentaise आसवन